कस्ता फल कतिबेला खादा धरै लाभदाइक ? केहि टिप्स - ज्ञानविज्ञान
आज हामी तपाईंलाई कस्ता फल कतिबेला खाने भन्ने विषयमा जानकारी दिँदै छौं ।
दैनिक बिहान स्याउ खानुहोस्
स्याउ बिहानको समयमा खाँदा यसले स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पुर्याउँछ । यसमा पेक्टिन नामको तत्व पाइन्छ जसले रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल घटाउने गर्दछ । यदि स्याउ राती खानुहुन्छ भने पेक्टिनलाई पचाउन समस्या हुन्छ जसले एसिडिटिको समस्या हुनसक्छ ।
लञ्चपछि खानुहोस् केरा
केरालाई लञ्च पनि खानुहोस् । यसले शरिरको प्रतिरोधी क्षमतालाई वृद्धि गर्दछ । केरा राती खाँदा पच्न समस्या हुने गर्दछ ।
आलु बिहान खानुहोस्
आलू वा यसबाट बनेका खानेकुरा सकेसम्म बिहानको नाश्तामा खानुहोस् । आलुमा अत्यधिक क्यालोरी हुने भएकाले राती खाँदा तौल बढ्ने गर्दछ ।
सुत्नुअघि दुध पिउनुहोस्
सुत्नुअघि दुध पिउँदा स्वास्थ्यमा निकै फाइदा पुर्याउनुका साथै मिठो निन्द्रा पनि लाग्ने गर्दछ । यद्यपी, तपाईं यदि बिहान जिम वा व्यायाम गर्नुहुन्छ भने यसलाई बिहान पनि पिउनसक्नुहुन्छ ।
शरीरलाई शीतलता दिन खानुहोस् यस्ता फलफूल !
Don't Miss it मासु खान छाड्नुनका केहि फाइदा यस्ता छन्
Up Next मूल्यवान काजुको फाइदा पनि मूल्यवान छन्, तपाईलाई थाहा छ कि छैन ?
यस्तो छ समाधान, के तपाइको बच्चामा पनि अनिन्द्राको समस्या छ ?
बच्चाको अनिन्द्राको कारणले, अहिले धेरै आमाबुवाका लागि टाउको दुखाई बनेको छ । राती अबेरसम्म बच्चा नसुत्ने, सुत्नुअघि झगडा गर्ने, निदाउन नसक्ने, निदाएपनि…
यस्ता केहि खानेकुरा जुन खाली पेटमा बिर्सेर पनि नखानुहोस्
एसिडको स्तर बढाउने खानेकुरा एसिडिटीजस्ता विभिन्न स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने गर्दछ । पुणेका डाइटिशियन डा. नेहा शिरकेले खाली पेटमा केही खानेकुरा…